Ihe nkiri ị ga-ekiri tupu ị gaa Rom ịmata obodo ahụ | Akụkọ Njem
Ihe nkiri 9 iji lelee tupu ị gaa Rome
Luis Martinez | 26/04/2021 10:19 | Emelitere ka 26/04/2021 10:23 | omenala, General, Italia
Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ njem gị Italytali, n’etiti obodo niile ị nwere ike ịga na mba, Rome nwere ike ịbụ nkwụsị iwu na ụzọ gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọpụta ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Rome, ihe mbụ anyị kwesịrị ịgwa gị bụ na Obodo Ebighebi abanyewo oke na ụwa nke sinima. Nke a na teepu setịpụrụ ma na mmalite ya na nhazi ya ugbu a.
Banyere nke mbu, enweela ụdị ihe nkiri dị iche iche nke na-emegharị Rome oge gboo: peplum. Ma, dị ka nke abụọ, site na Neorealism nke ndị Italy ka ụlọ ọrụ nke Hollywood ahọrọla isi obodo nke Italia dị ka ọnọdụ maka ọtụtụ ihe nkiri ya. Mana, n’ebughi ọzọ, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ihe nkiri ị ga-elele tupu ị gawa Rome.
1 Ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Rome: site na peplum ruo na sinima taa
1.2 'Ememe ezumike na Rome'
1.3 'La dolce vita', kpochapụwo ọzọ n'etiti fim ị ga-ahụ tupu ịga Rome
1.4 'Ezigbo akwụkwọ edetu'
1.5 'Rome, obodo mepere emepe'
1.6 'Otu ụbọchị'
1.7 'Toga Rome n'ịhụnanya'
1.8 'Akwa ima mma'
1.9 'Accatone', eserese nke ala ịta ahịhịa
Ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Rome: site na peplum ruo na sinima taa
Dị ka anyị gwara gị, ihe nkiri ị kwesịrị ịhụ tupu ịga Rome weghaara obodo ahụ dị ka ebe. Ma, na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime ha na-eme ya otu agwa ọzọ nke na-emetụta na ọbụna na-ekpebi ndụ ndị protagonists. Anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime fim ndị a.
Akwụkwọ maka 'Ben-Hur'
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụdị cinematographic nke peplum, Hollywood blockbuster bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma. Duru ya William wyler ma na-agụ agụụ Onyinyechi ugochukwu, Stephen nwa, Jack hawkins y Haya Harareet, dabere na homonicous akwụkwọ site Lewis wallace.
Ihe nkiri a malitere na Judia nke afọ XNUMX nke oge anyị. Ọkacha mara mma Judá Ben-Hur e boro ya ebubo na ọ na-emegide ndị Rom ma maa ya ụgbọ epeepe. Mgbe ha zutere Jizọs Kraịst wee gafere ọtụtụ mgbanwe, onye ahụ bụ isi na-abịarute Rome ghọrọ onye bara ọgaranya na onye asọmpi n'ọsọ ụgbọ ịnyịnya. Mana naanị ya nwere otu ebumnuche: ịbọ ọbọ na enyi ya ochie Mesala, onye kpatara mkporo nke nne ya na nwanne ya nwanyị.
'Ben-Hur' nwere mmefu ego nke nde dollar iri na ise, nke kasị ukwuu maka ihe nkiri ruo mgbe ahụ. Ihe karịrị narị ndị ọrụ abụọ rụrụ ọrụ wuo ihe ịchọ mma ya, nke gụnyere ọtụtụ narị ihe oyiyi na fris. N'otu aka ahụ, otu narị ndị nwanyị na-akwa ákwà na-ahụ maka imepụta uwe ndị ahụ. Na ịgba ọsọ ụgbọ ịnyịnya Ọ bụ otu n'ime ama ama na akụkọ ihe mere eme nke sinima.
Ihe nkiri a mepere na New York na Nọvemba 18, 1959 wee bụrụ ihe nkiri nke abụọ kachasị elu na-esote 'Gone with the Wind'. Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughị, ọ nwetara iri na otu Oscars, gụnyere Foto kacha mma, Onye nduzi kachasị mma, na onye na-eme ihe nkiri kacha mma. N'ọnọdụ ọ bụla, a ka na-ele ya anya dị ka otu n'ime fim kachasị mma na akụkọ ihe mere eme nke sinima.
'Ememe ezumike na Rome'
Plaza de España, ebe otu n'ime ebe nkiri ndị ama ama nke 'Ememe Ndị Rom'
Ihe nkiri ọzọ duziri William wylerỌ bụ ezie na o nwere a dị nnọọ iche isiokwu, ọ bụkwa otu n'ime ihe nkiri na-ahụ tupu na-aga Rome. N'okwu a, ọ bụ ihe ọchị ọchị ọchị Audrey Hepburn y Uche Gregory. Nke mbu bu Anna, adaeze nke, mgbe ọ gbanarịrị na ndị otu ya, nọọ otu ụbọchị na abalị dị ka ndị Rome ọ bụla.
Agbagburu ya na ama Cinecittá nka, dịdebere isi obodo itselftali n'onwe ya. Nhọrọ maka asaa Academy Awards, ọ meriri atọ gụnyere Best Omee maka agaghị echefu echefu Audrey. N'otu aka ahụ, ihe nkiri dị ka nke nwere ma ndị protagonists na akwa mgbago nke Ogige Spain ma ọ bụ nke njem ọgbatumtum agbadata na ebe edebere sinima.
'La dolce vita', kpochapụwo ọzọ n'etiti fim ị ga-ahụ tupu ịga Rome
Ọnọdụ kasị ewu ewu na 'La dolce vita'
Edere ma duzie ya Federico Fellini na 1960, ọ na-e-otu olu to dị ka otu nke ochie na fim akụkọ ihe mere eme. Ọ malitere na Cannes Film Festival n'afọ ahụ wee nye ya Nkwụ ọla edo, ọ bụ ezie na o nwere obere chi na Oscars ebe ọ bụ naanị ya nwere nke nwere ụdị ejiji kacha mma.
Ndị na-akwado ya bụ Marcelo mastroianni, Anita ekberg y Anouk Aimée. Nkata ahụ na-akọ ọtụtụ akụkọ nweere onwe ha nke njikọ ya bụ obodo Rom n'onwe ya na gburugburu ya. Ọzọkwa na nke a, ị ga-amata ebe a na-agaghị echefu echefu: nke ndị protagonists na-asa ahụ na Fontana di Trevi.
'Ezigbo akwụkwọ edetu'
Nanni Moretti, onye isi ‘Ezigbo akwụkwọ akụkọ’
Autobiographical film nke onye nduzi ya na protagonist ya, Nani Moretti, na-akọ maka ahụmihe ya na Obodo Ebighị Ebi. Ọ mejupụtara atọ nọọrọ onwe ha na-agwakọta ntochi na akwụkwọ. E wepụtara ya n'afọ 1993, n'afọ na-eso ya, enwetara ya Nkwụ ọla edo na Cannes na onyinye maka onye nduzi kacha mma.
A maara nke ọma ihe nkiri nke onye protagonist na-aga obodo na azụ nke Vespa na-akọwa ihe kpatara ya ji hụ obodo n'anya dịka Akwa Flaminio o Garbatella. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ozi gbasara mpaghara ndị Rome amachaghị na etiti, anyị na-adụ gị ọdụ ile ihe nkiri a.
'Rome, obodo mepere emepe'
Ihe ngosi sitere na 'Rome, obodo mepere emepe'
Obere obere olu nwere ihe nkiri a Roberto Rosellini malitere na 1945. Ntọala na Agha Worldwa nke Abụọ, ọ na-akọ ọtụtụ akụkọ ndị protagonists ha nwere njikọ na iguzogide ndị Nazi.
Otú ọ dị, otu n'ime ndị bụ isi bụ ụkọchukwu nna Pietro, nke ndị German gbagburu wee bụrụ ihe edepụtara Luigi morosini, onye ụkọchukwu nyeere ndị na-eguzogide ya aka ma taa ya ahụhụ ma gbuo ya.
N'otu aka ahụ, ọrụ nke Ọkwụrụ bekee, nwanyi na egwuri egwu Ana Magnani. Tinyere nke a, ihe nkiri a bụ Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist na Giovanna Galletti. Ọ bụ ụdị teepu ọjọọ na o nwere nsogbu na mgbochi. Na nloghachi, ọ nwetara Nkwụ ọla edo na Ememme Nkiri Cannes.
Marcelo Mastroianni, kpakpando nke 'Otu ụbọchị' ya na Sofía Loren
Marcello mastroianni y Sophia Loren Ha rụkọrọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ fim, mana nke a bụ otu n'ime ihe kacha mma. E debere ya na XNUMXs, mgbe fascism nọ na-aga n'ihu, ma bụrụ ihe osise dị oke mkpa nke ọha ndị Italy n'oge ahụ.
Mastroianni na-arụ otu ụlọ ọrụ redio gbagburu n'ihi na ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke na Loren na-egwu nwanyị lụrụ onye ọrụ gọọmentị. Ha abụọ batara na mmekọrịta mgbe ha zutere na ndapụta n'ihi na ọ nweghị onye ọ bụla gara njem na nsọpụrụ nke Hitler na May 1938, XNUMX.
Onye nduzi ihe nkiri ahụ bụ Ettore Scola, ndị rụkọkwara ọrụ na edemede ahụ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ọ na-arụ ọrụ nkwado na fim ahụ Alessandra mussolini, nwa nwa nke onye aka ike onye aka ike. N'ịbụ nke a na-enye onyinye sara mbara, ọ nwetara nhọpụta Oscar abụọ: onye na-eme ihe nkiri kacha mma na ihe nkiri asụsụ mba ọzọ kacha mma, ọ bụ ezie na emerighị nke ọ bụla.
'Toga Rome n'ịhụnanya'
Roberto Benigni, otu n'ime ndị protagonists nke 'A Roma con amor'
Na nso nso a bụ ihe nkiri a duziri Original Mix Allen, dị ka e wepụtara na 2012. Ọ bụ ihe ọchị ọchị ọchị nke na-akọ akụkọ anọ niile nke nwere Obodo Ebighị Ebi dị ka ntọala ma na-elekwasị anya na isiokwu nke mmezu onwe onye na ama. Otu n'ime ndị protagonists, onye na-emepụta egwu na-akpọ Jerry, bụ Allen n'onwe ya.
Ndi ozo bu Jack, nwa akwukwo ihe owuwu Jesse eisenberg; Leopoldo, nwoke a na-amaghị aha ya nke na-aghọ onye mgbasa ozi na mberede na onye na-etinye aka Roberto Benigni, na Antonio, ọrụ ọ na-arụ Alessandro tiberi. Tinyere ha Penelope Cruz, Fabio Armilato, Antonio Albanese na Ornella Muti.
'Akwa ima mma'
Toni Servillo, kpakpando nke 'Akwa ima nma'
Contemporary na nke gara aga, dịka ewepụtara ya na 2013, bụ ihe nkiri a Paolo Sorrentino, onye dekwara edemede ahụ n'akụkụ Umberto Contarello. O nwekwara ihe omume.
Na Rome nke Ferragosto bibiri, onye nta akụkọ na onye edemede nwere nkụda mmụọ Jep Gambardella O metụtara ụdị onye nnọchi anya dị iche iche nke ngalaba dị elu. Ndị isi, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị omekome na-acha ọcha, ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọzọ na-eme atụmatụ a na-eme n'obí eze na obodo ndị mara mma.
Ihe nkiri nkiri Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, n'etiti ndị ntụgharị okwu ndị ọzọ. N’afọ 2013 ka enyere ya onyinye ahụ Nkwụ ọla edo Cannes na, obere oge, na Oscar maka ihe nkiri asụsụ mba ọzọ kacha mma. Mana ihe kachasị mkpa bụ na ọ bụ nwelite nkata nke 'La dolce vita', nke anyị gwara gị maka ya.
'Accatone', eserese nke ala ịta ahịhịa
Pier Paolo Pasolini, onye isi nke 'Accatone'
Ndepụta ihe nkiri a iji hụ tupu ị gawa Rome enweghị ike ịlafu otu nke ya Pier paolo pasolini, otu n'ime ndị ọgụgụ isi nke kacha mara amara iji jide isi obodo Ebighebi, ọ bụ eziokwu na echiche ya dị iche iche nyochachara ya.
Anyị nwere ike ịgwa gị banyere ọtụtụ ihe nkiri, mana anyị ahọrọla nke a n'ihi na ọ bụ foto nke oke Rome. Accatone bụ pimp si na ala ịta ahịhịa ndị na-anaghị akwụsị agụụ, dị ka ìgwè ndị enyi ya. Ike ime ihe ọ bụla tupu ọrụ, ọ na-anọgide na-akọ ma na-achọta ụmụ nwanyị ọhụrụ iji mee ihe.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na nkata ahụ, ọ bụ ihe osise jọgburu onwe ya nke ifo ndị Rom nke iri ise nke narị afọ gara aga. Ụọ site na Neorealism nke ndị Italy ma tughariakwa ya Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi n'etiti ndị ntụgharị okwu ndị ọzọ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị nke ahụ Bernardo Bertolucci ọ rụrụ ọrụ dị ka osote onye nduzi na fim ahụ.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime Ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Rome. Ha bụ ndị nnọchi anya akụkụ nke ndị niile nwere Ebighebi City dị ka a ogbo ma ọ bụ ọbụna dị ka onye ọzọ protagonist. N'ezie, anyị nwere ike ịkpọ ndị ọzọ dịka 'Ndị Mmụọ Ozi na Ndị Mmụọ Ọjọọ'nke Gregory Widen dere; 'Abalị ndị Cabiria'nke Federico Fellini dere; 'Mma'site Luchino Visconti ma ọ bụ 'Rie Ekpere Lovehụnanya'nke Ryan Murphy dere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe nkiri 9 iji lelee tupu ị gaa Rome
7 ụdị nri Mexico nke ị kwesịrị ịnwale
Akụkọ banyere Seville